Isiphetho esisodwa sokuvalwa kwe-Alumina Metallized Ceramic Tube China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > Isiphetho esisodwa sokuvalwa kwe-Alumina Metallized Ceramic Tube
Isikhungo sethu sinikeza amathobhu amaningi ensimbi enesisindo e-aluminium e-aluminium oxide, i-nitride, i-zirconia ne-beryllium oxide yezimboni ze-electronical, ze-electronic, zezokwelapha nezase-aerospace. Uhlaka oluyinkimbinkimbi lusetshenziswa esigabeni esithile somzimba we-ceramic basebenzisa ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa izidakamizwa kanye nezindlela zokushayela. Amakhono ethu asivumela ukuba sibe nemisipha emizimbeni ephathekayo, e-cylindrical, neyinkimbinkimbi. I-Moly-Manganese (Mo / Mn) yiyona ejwayelekile yokugqoka impahla esetshenziselwa ukwakha i-metallization. Ngaphandle kwalokho, sinikeza i-tungsten (W) njengesendlalelo se-metallization.
Esikhathini esivamile, ukumbozwa kwensimbi kuzotholakala ngokulandela ungqimba lwe-metallization, njenge-nickel, i-golden plating. Kuzokwandisa ukuthambisa kwamanzi enqubo yokugaya futhi kuvimbele uketshezi lwensimbi kube yikhiidiza kanye.
Kukhona inqwaba ye-geometry ye-ceramic tube ne-metallization, njengokuphela kwesinye isivaliwe, zombili zombili ziphela ithubhu evulekile, i-ceramic enezimbobo ezingemuva, ithrekhi ye-rectangular shape kanye nokunye.